चर्को भोकमा तत्काल नखानुहोस् यी कुरा
कहिलेकाहीँ कामको व्यस्तता या अन्य परिस्थितिका कारण मान्छेहरू लामो समयसम्म भोक खपेर बस्ने गरेको पाइन्छ । भोकलाई नै लामो समय कुराउनु पेटको स्वास्थ्यका लागि निकै हानिकारक हुने चिकित्सकहरूले बताउने गरेका छन् । भोक खपेर बस्दा कमजोरीले चक्कर लाग्ने खतरा पनि हुन्छ । त्यसो त, लामो समयदेखि छिप्पिएको भोको पेटले एक्कासि टन्न पेट भर्ने खाना..
बच्चालाई धेरै गाली दिदा के हुन्छ ?
बच्चाहरू स्वभावैले धेरै चकचक गर्ने, झगडा गर्ने तथा जिद्दी गर्ने पनि हुन्छन् । त्..
भान्सामा अधिकांशले गर्ने यी हुन ५ गल्ती
भान्सेको जिम्मेवारी सम्हालेपछि अधिकांश चाहन्छन्, मीठो र ट्वाक्क परिकार बनाऊँ । क..
कोही एक्कासि बेहोस भयो ? यसरी गर्नुहोस् उद्धार
चक्कर लागेर मान्छे एकाएक ढल्न र बेहोस हुन सक्छ । चक्कर लाग्ने विभिन्न कारण हुन्छ..
बच्चा राखेर कार चलाउँदा यसो गर्नुहोस्
। यो सम्भव नभए साइड लक, सेन्टर लक तथा विन्डोज लक गरेर पछाडि राख्नु सुरक्षित हुन्..
बच्चालाई झाडापखालाबाट जोगाउन यसो गरौँ
दुई हप्ताभन्दा बढी भएको छैन भने एन्टिबायोटिक खुवाउनु हुँदैन । चिकित्सकको सल्लाहमा मात्र खुवाउनुपर्छ । दुई हप्ताभन्दा लामो समय झाडापखाला लागेमा त्यसलाई दीर्घ झाडापखाला (क्रोनिक डायरिया) भनिन्छ । यसको उपचार फरक हुन्छ । त्यसमा पहिले कारण पत्ता लगाउनुपर्छ । त्यसका लागि स्वास्थ्य संस्थामा लैजानुपर्छ । झाडापखाला भएको बच्चामा पोटासियम ..
दुई वर्षसम्मका बच्चाप्रति यस्तो हुनुपर्छ आमाको जिम्मेवारी
-बच्चा जन्मिएको एक घन्टाभित्र स्तनपान गराउने । बच्चालाई शीतांग हुन नदिन दुई–चार घन्टासम्म ननुहाइदिने । आराम गर्ने र पर्याप्त स्तनपान गराउने । -जन्मिएको ३५ दिनभित्र बच्चाको जन्मदर्ता गराउने । ६ महिनासम्म आमाको दूध मात्र खुवाउने । -६ महिनाबीचको अवधिमा दिनुपर्ने सबै खोप लगाउने । स्वास्थ्य संस्थामा लगेर प्रत्येक महिना वृद्धिविकास अन..
के हो चाउरी, कसरी बच्ने ?
प्रायः बुढ्यौली लागेपछि छालामा चाउरी पर्न थाल्छ । तर, कतिपय व्यक्तिको युवावस्थामै पनि चाउरी पर्न थाल्छ । चाउरी परेपछि बाहिरी सौन्दर्यमा ह्रास आउँछ । यसको तनावमा युवा नै बढी हुन्छन् । किनभने युवावस्थामै सौन्दर्य गुमेको स्वीकार्न गाह्रो पर्छ । आखिर के कारणले छाला चाउरी पर्छ ? युवावस्था र बुढ्यौलीमा छाला चाउरिने कारण एउटै हो ? [&he..
दादुराका कारण दैनिक ४०० बालबालिकाको मृत्यु
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ– विश्व स्वास्थ्य सङगठन र युनिसेफको एक प्रतिवेदनका अनुसार विश्वभरी अहिले पनि दादुराका कारण दैनिक झण्डै चार सय जना बालबालिकाको मृत्यु हुने गरेको छ । सन् २००० देखि २०१५ सम्मको अध्ययन गर्दा दादुराबाट मृत्यु हुनेहरुको संख्या घट्दै गएको देखिएपनि सन्तुलित सुधार भने हुन नसकेको राष्ट्रसङ्घका प्रवक्ताले बताएका छन् । “ल..
ओठ फुट्न थाल्यो ? जाडोमा ओठको सुन्दरतालाई कायम र सुरक्षित राख्ने ‘ब्यूटी टिप्स’
काठमाडौं – सुन्दरताको परिभाषा मान्छेपिच्छे फरक हुन्छ त्यसकारण त मानिसहरु भन्ने गर्छन्, सुन्दरता वस्तुमा नभई आँखामा हुन्छ । तर पनि सुन्दरतामा विशेष महत्व राख्ने ओठ गुलाबी, पिपलपाते पातलो र टम्म परेको देखिए त्यसलाई आकर्षक ओठको संज्ञा दिइन्छ । सुन्दरताको दृष्टिकोणले मात्र नभई शरिर कत्तिको स्वस्थ छ भन्ने कुरा ओठको रंगले पनि दर्साउँछ..
मधुमेहः चालिस प्रतिशत बिरामीको आँखामा असर
काठमाडौँ – मधुमेहका बिरामी बढेसँगै त्यसको असर पीडितका आँखामा नराम्ररी परेको पाइएको छ । मधुमेहका कारण ३८ दशमलव ५ प्रतिशत बिरामीको आँखामा असर पर्ने देखिएको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको तथ्याङ्कले देखाएको छ । मधुमेह भएको २० वर्षमा पहिलो प्रकारको करिब सबै र दोस्रो प्रकारको मधुमेहमा करिब दुई तिहाइ बिरामीको आँखाको पर्दा (आँखाको भित्री भाग..
खानाबार : शिक्षण पेशा छाडेर जन्मियो ओरेन्ज क्याफे
काठमाडौ– ललितपुरस्थित कुपनडोल चोकबाट केही पर छ ओरेन्ज क्याफे । ओरेन्ज क्याफे सञ्चालनमा आएको ठ्याक्कै ३ वर्ष भयो । यदि तपाईं नयाँ नयाँ परिकार र स्वादिष्ट खानाका पारखी हुनुहुन्छ भने ओरेन्ज क्याफे तपाईंको राम्रो गतव्य बन्न सक्छ र यसका सञ्चालक हुन्, सन्तोष ढकाल । सन्तोष ढकाल कुनै होटल म्यानेजमेन्टका विद्यार्थी होइनन् न त पुर्खौदेखि ..
दुहुना पशु नपघ्रिएमा इन्जेक्सन दिने बानी नबसाल्नुस्
वर्षाको बेला पशुपालनको लागि कठिन तथा धैर्य गर्नुपर्ने समय मानिन्छ । यसबेला पशुहरूलाई विभिन्न रोगले सताउने समस्याको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । यी रोग सँगसँगै पोथी पशुको जीवन कालको एक महŒवपूर्ण प्रक्रिया प्रायः जसो यसै मौसममा देखिने गर्छ, त्यो हो ब्याउने बेला सुरु हुन्छ । अनुमान गाई भैँसीहरू आफ्नो गर्भावस्था अवधि पूरा गरी वर्षाकालको..
के हो मुलुकभर फैलँदै गरेको डेंगु, कसरी बच्ने ?
हाल नेपालको विभिन्न भू–भागमा डेंगु महामारीको रूपमा फैलँदै गरेको छ । यो वर्ष तराईका धेरै जिल्लामा र केही पहाडी जिल्लामा समेत डेंगु फैलिरहेको छ । समयमै यस रोगको रोकथामको बारेमा नसोचिँदा र जनचेतनाको आभावले हरेक वर्ष यो महामारीकै रूप लिने गरेको छ । के हो डेंगु ? विश्वमा लामखुट्टेको टोकाईबाट अति नै शीघ्र फैलने भाइरसको […]
चाणक्य नीतिः महिलाले जवानीमा बिर्सेर पनि गर्न नहुने ६ कुरा
केही मुरा हाम्रो जिन्दगीमा यस्ता हुन्छन् जसलाई अपनाए मानिस धेरैजसो खुसी हुनेछ । यस्तै केही कुरा छन् जो चाणक्य नीति नामक ग्रन्थमा लेखिएको छ । यो ग्रन्थमा हरेक आयुका मानिसका लागि थुप्रै उपयोगी कुराहरु लेखिएको छ । यहाँ आज हामी तपाईंलाई महिलाले आफ्नो जवानीमा गर्न नहुने ६ कुराबारे जानकारी दिँदै छौं जसलाई चाणक्य नीतिबाट साभार [&helli..
जाडोमा यस्तो हिटर राम्रो
चिसो मौसम सुरु भएको छ । चिसोबाट बच्न विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा हिटरको सहारा लिनेहरू धेरै छन् । नेपालमा इलेक्ट्रिक, ग्यास तथा फ्यान गरी तीन प्रकारका हिटर प्रचलनमा छन् । उपभोक्ताले आफ्नो आवश्यकताअनुसार यस्ता हिटर छनोट गर्न सक्छन् । नेपालमा उपलब्ध हिटरको विशेषता र प्रयोग गर्ने तरिकाबारे इस्ट अफ काठमाडाैँ इलेक्ट्रोनिक्सका बाबाराजा श्र..
डाक्टरका कुरा : गर्भवतीले के खाने, के नखाने ?
गर्भवती अवस्थामा बच्चालाई स्वस्थ राख्न कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, भिटामिनको आवश्यकता पर्छ । आममहिलालाई सामान्य समयभन्दा गर्भवती अवस्थामा बढी क्यालोरीको आवश्यकता पर्छ । जानिराखौँ गर्भवती भएको अवस्थामा कस्ता खानेकुरा सेवन गर्नु राम्रो हुन्छः १.फोलिक एसिड, क्याल्सियम, आइरन, फाइबर, प्रोटिनयुक्त खानाको आवश्यकता हुन्छ । २.हरियो सागसब्जी..
डाक्टरका कुरा : यस्ता १० कारणले लाग्छ चक्कर
तपाईंलाई कहिलेकाहीँ बसिरहँदा या हिँडिरहँदा घुमाएजस्तो, हल्लाएजस्तो महसुस भएको हुन सक्छ । यस्तो कसैलाई कहिलेकाहीँ हुन्छ भने कसैलाई निरन्तर दोहोरिएको पनि हुन सक्छ । जब तपाईंको दिमागमा नियमित मात्रामा रगत सञ्चालन हुन सक्दैन, त्यतिवेला रिँगटा लागेको महसुस हुन्छ । यसरी रिँगटा लाग्नुका कारण यी हुन सक्छन्ः १.कानमा शरीरलाई सन्तुलनमा राख..
गर्भवती महिलाको कोठामा राख्नुहोस् यी ८ वस्तुः आमा हुनेछिन् स्वस्थ, बच्चा प्रतिभावान्
हाम्रो अगाडि महाभारतभन्दा अर्को दोस्रो उदाहरण हुन सक्दैन । हो, अभिमन्युले आमा सुभद्राको गर्भबाटै धेरै कुरामा निपुणता हाँसिल गरेका थिए । यस बारे थाहा नहुने सायदै कोही होला । वास्तवमा, गर्भवती महिलाको स्वास्थ्यदेखि निकै स–साना कुराहरुको ख्याल राख्नुपर्छ जसको असर गर्भमा रहेको बच्चामा समेत पर्ने गर्दछ । गर्भवती हुँदा आमाले जुन वाताव..
जाडो मौसममा यी १० खानेकुराले राख्नेछन् तपाईंको स्वास्थ्यको ख्याल
जाडोयाममा तपाईंको वरिपरिको वातावरण परिवर्तन हुने भएकाले यसले तपाईंको शरिरभित्र पनि हलचल पैदा गरिदिन्छ । चिसो मौसममा तपाईंको ऊर्जाको मात्रा, मेटाबोलिजम र तपाईंले मनपराउने खानामा समेत परिवर्तन हुन्छ । त्यसकारण जाडो मौसममा तपाईंले यी खानेकुरा खाँदा तपाईं स्वस्थ रहन मद्दत पुर्याउँछ । नट्सः यसमा पोटासियम, म्याग्नेसियमजस्ता तत्व हुन्छ..
डाक्टरको कुरा : स्वस्थ जीवनका लागि यस्तो रुटिन चाहिन्छ
जो कोहीको चाहना हुन्छ, स्वस्थ जीवन । तर, स–साना गल्तीले मान्छे आफैँ रोगी बनिरहेको हुन्छ । व्यक्ति रोगी हुनुमा दोष आफ्नै हो । हरेक दिन स्वस्थ जीवन जिउनका लागि हरेक बिहानको गतिविधिले ठूलो महत्व राख्छ । बिहानको कर्मले दिनभरको कर्ममाथि भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । त्यसैले हरेक बिहान स्वस्थ जीवनका लागि यस्तो रुटिन बनाउन डा. लोचन [&helli..
१. महिलामा टेस्टोस्टेरोन हर्मोनको उत्पादन बढी भयो भने शरीरका विभिन्न भागमा पुरुषको जस्तै बाक्ला रौँँ आउँछन् । टेस्टोस्टेरोन हर्मोनलाई पुरुष हर्मोन पनि भनिन्छ । पुरुषमा बढी हुने यो हर्मोन महिलामा पनि केही मात्रामा हुन्छ । महिलामा यसको मात्रा बढ्न गयो भने पुरुषमा जस्तै रौँ पलाउन थाल्छन् । टेस्टोस्टेरोन हर्मोन बढ्दा महिलामा दाह्री..
जाडो मौसममा बच्चालाई निमोनयाले च्याप्न सक्छ, कसरी जोगाउने ? पढ्नुहोस्, बालरोग विशेषज्ञ मीनराज पाठकका टिप्स
काठमाडौं– जाडोयाम सुरु भएसंगै बच्चामा रुघाखोकी र निमोनियाले बढी संक्रमण गर्दछ । साधारण सावधानीले बच्चालाई निमोनियामाट जोगाउन सकिन्छ । तर, समयमै सावधानी नअपनाउदा निमोनियाकै कारण धेरै बच्चाहरुले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । बरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर मीनराज पाठकसँग रातोपाटीकर्मी सर्मिला थापाले निमोनियाबाट बच्चालाई जोगाउने उपाय खोज..
कपाल झर्छ ? यी आयुर्वेदिक तरिका अपनाउनुहोस्
सुन्दरता बढाउनका लागि कपालले निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्दछ । तर जब कपालको रेखदेखमा लापरवाही गर्नुहुन्छ तब कपाल झर्ने समस्या उत्पन्न हुन सुरु गर्छ । कपाल झर्न सुरु गरेपछि यसले जो सुकैलाई पनि तनावमा पार्न सक्छ । आज हामी तपाईंलाई कपाल झर्न रोकिने आयुर्वेदिक तरिकाबारे जानकारी दिँदैछौं । – मह थुप्रै रोगलाई टाढा राख्न सक्षम [&he..
ब्युटिसियनका कुरा : अनुहार, आँखा र ओठमा यसरी गर्ने श्रृङ्गार
अनुहारमा अनुहारलाई सफा पानीले पुछेर क्लिन्जिङ गरिदिने । मेकअप गर्नुअगावै क्लिन्जिङ गर्ने । त्यसपछि पुछेर टोनर लगाई एन्टिसनस्किन क्रिम लगाउने । त्यसपछि फाउन्डेसन लगाउने । फाउन्डेसन लगाउँदा अनुहारको उठेको भागमा डार्क कलर प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यसपछि अनुहारमा लाइट फाउन्डेसन प्रयोग गर्ने । अनुहारमा तिलकोठी अथवा अरू कुनै दाग भए कन्सिलर..